(Last Nohavaozina: 12/12/2019)
Manonofy momba ny mpizaha tany rehetra nitsidika vatosoa miafina any Eoropa ary koa ny Eoropeana malaza metropolises. Ny sary amin'izy ireo am-pifaliana nijoro teo akaikin'ny Tour Eiffel, Colisée na Big Ben manao ny rehetra hahatsapa miavaka (ary tanteraka mahazo fa!). Na zava- Instagram-mahadomelina na "marina" dia lavitra, toerana mandeha manerana izao tontolo izao dia ny zava-drehetra!
FANAMARIHANA: Raha toa ianao ka mieritreritra eo oharina amin'ny fiara fitateram-bahoaka mandalo nandeha lamasinina – ny safidy dia tokony ho lamasinina.
Ny zavatra voalohany ny hevitrao ny rehefa miresaka momba Luxembourg no banky. Ny firenena dia fantatra tsara tsara noho ny aminy. Fa Luxembourg ny steepled fiangonana, trano vato, ary ny lakandrano kely hanambara nitsidika azy io kokoa noho ianao nankafy Te manantena. Izany no antony ity toerana ity dia iray amin'ireo tsy fahita firy vatosoa miafina any Eoropa amin'ny kaontinanta ity ny kapitaly. Izy io dia toerana tsara tarehy, napetraka teo ny fotoana izay ny Petrusse sy renirano Alzette mihaona. Afaka mitsidika ny sasany amin'ireo toeram-pisakafoanana sy valahana trano fisotroana akaikin'ny afovoan-kianja. Fanampin'izany, Rue Philippe II manana bunch ny toeram-pivarotana, mba ho vonona tsara ny mandany vitsivitsy bucks! tanteraka Luxembourg toerana tonga lafatra ho tantaram-pitiavana faran'ny herinandro.
Sarotra ny ho heverina iray amin'ireo vatosoa miafina any Eoropa, rehefa manana fôsily dinôzôro akaiky anao. Ya, mamaky azy io tsara. Sisan-karingarina azo dinôzôro hita manamorona ny morontsiraka Weymouth Jurassic. Na izany aza, tsy firy ny olona manapa-kevitra ny haka 3 ora mitaingina fiaran-dalamby avy any London ny mahita azy ireo. Ireo izay manao hafa dia afaka mahazo watersports ary manan-trondro sy ny poti-teny amoron-dranomasina. Na hifidy ny sakafo ny sasany amin'ireo gastropubs. Koa satria ny farantsa dia kely teo amin'izao fotoana izao, izao no fotoana mba hanao nankany Angletera. Ary ny fotoana noho ny mitsidika Weymouth ho Aogositra mandritra Weymouth Fetibe.
Did we help with deciding which place to visit next on your upcoming adventures? tsara! Ireo toerana dimy monja ohatra amin'ny fomba mbola misy ny sasany undiscovered sy vatosoa miafina any Eoropa. Ny izao tontolo izao dia feno tsy ampoizina miandry anao ny hahita azy ireo. Nandeha lamasinina no hanome anareo ny fahafahana hahita ireo toerana avy amin'ny zoro hafa. koa, dia mahazo ny diany more. Raha toa ka mila manampy mieritreritra ny diany, na te-hividy tapakila, tsidiho antsika amin'ny SaveATrain.
No tianao mba hiraketana ny lahatsoratra bilaogy teo amin'ny toerana, Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra, ary hanome voninahitra fotsiny amin'ny rohy amin'ity lahatsoratra bilaogy, na ianao dia tsindrio eto: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/hidden-gems-europe/ - (Ampidino nidina hamangy ny Embed Code)
#Camogli #hiddemgems #Saxony #weymouth antwerp europetrains europetravel Luxembourg fiaran-dalamby Travel torohevitra
Train Tsidika, Train Travel Aotrisy, Train Travel Repoblika Tseky, Train Travel Frantsa, Train Travel Alemaina, Train Travel Italia, Train Travel Espaina, Train Travel The Netherlands, fiaran-dalamby Travel torohevitra, Travel Europe
Train Travel Alemaina, Train Travel Italia, Travel Europe